Guraandhalaa 26, 2021
Xumura baatii Sadaasaa loltoonni Eertraa magaalaa Aksuum keessatti fixiisa raawwatameen namoota dhibbaan laka’aman irra hedduun isaanii dhiirota ta’an tooftaa dhaan fixan jechuu dhaan gabaasi Amnesty International haaraan beeksisee jira. Gabaasi sun torban darbe kan torban darbe Associatie press dhiyeesseen kan wal fakkaatu yoo tau namoota ijaan argan 40 wabii godhatee jira.
Walitti bu’iinsi Tigraay keessaaan fixiinsi hamaan raawwatame maal ta’uu danda’a kan jedhu gabaasi haaraan kun siiviloonni ennaa baqatan, loltoonni immoo ennaa itti dhukaasan, dhiirota tarreetti naqanii dudda isaanii irratti ennaa dhukaasanii fi namoonni kanneen du’an akka hin awwaalle dhorkuu isaanii ibsa gabaasi kun. Itiyoopiyaan kaa irratti yaada kennite hin abdu. Eertraan immoo gabaasi Associated Press sun kijiba ittiin jette.
Mootummaa dhaan kan hundeeffame itti gaafatamaan komiishina mirga namaa Itiyoopiyaa Daani’eel Beqqelee, ba’iin qorannoo Amnestiin ifa baase kn sirriitti ilaalamuu qaba jedhan.
Ba’iin komiishinichaa kan jalqabaa, hanga ammaatti lakkoobsi isaanii sirriitti kan hin beekamne Aksuum keessatti lammiiwwan, loltota Eetraan ajjeefaman ajjeefamuu tuqee jira jedha ibsu sun.
Komiishiner Daani’el akka jedhanitti Amnestiin Aksuumiin ilaalchisee gabaasi inni baase nutis gama komiishinichaatiin hordofaa kan turre dhimmootii yaaddessoo ta’uu isaanii waan hubannuuf, gabaasi Amnestii ilaalchi guddaan itti kennamuu qaba kan jenneef. Gama biraan garuu Amnestiin qorannaa kana naannoo sana dhaqqabuu waan dadhabaniif fageenya irraa geggeessuun isaa ni yaadatama.
Mala qorannaa hin baratamne miti, garuu qorannoon fagoo irraa geggeessamu hanga tokko murtaa’aa waan ta’uuf, nuti gama komiishinichaatin qorannaa nuti geggeessinu bakka sana dhaqnee ragaa itti dabalaa walitti qabuu dhaan haala uumame ilaalchisee ragaa guutuu argachuuf yaalii goona.
Garuu sadarkaa amma itti dhiyaateenis taanaan, ilaalcha guddaa fi miira itti gaafatama qabuun ilaalamuu qaba jedhan.
Namoota Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaatti Shakkaman Keessaa Laamroot Kamaal Yakkicha Irraa Bilisa, Jedhamte
Deggertoonni Bulchiinsa Waraanaa Maaynamaar Mormitoota Farra Fonqolcha Mootummaa Waliin Walitti Bu’an
Hanqinni Oksijiinii Wal’aansa Fayyaa Afriikaa fi Laatiin Ameerikaa Mudate